European Union Inoti Zvrango Zvicharamba Zviripo Kudzamara Referendamu Yaitwa Zvakanaka
Sangano re European Union, EU, rinoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, uye vamwe vavo vari muZanu PF, zvicharamba zviripo kusvikira Zimbabwe yaita referendamu isina mhirizhonga.
Vachitaura nevatori venhau muHarare mushure memusangano we EU waitirwa mu Brussels kuBelgium neMuvhuro, mumiriri weEU muZimbabwe, Ambassador Aldo Dell’ Arriccia vati sangano ravo rabuda nechisungo chekuti VaMugabe nevamwe vavo varambe vari pasi pezvirango kusvikira kwaitwa referendamu murunyararo.
Va Dell Arricia vati zvichitevera musangano uyu, Zimbabwe ichange yave kubvumidzwa kutengeserana nenyika dze muEU asi haibvumidzwe kuti itengeserane zvombo nenyika idzi.
Va Dell Arricia vati EU yatora danho iri mushure mekugutsikana nezvakaitwa nehurumende kubudikidza nekubuda nebumbiro idzva remitemo yenyika uye kupasiswa kwemabhiri maviri muparamende anobata nyaya dzesarudzo pamwe nekodzero dzevanhu.
Zvisungo zvabuda ne EU izvi zvinoreva kuti VaMugabe nevamwe vavo havasati vobvumidzwa kushanyira nyika idzi kunze kwekunge vachienda kumisanangano yeUnited Nations chete.
VaMugabe nevamwe vavo vari mu Zanu PF vakatemerwa zvirango neEU vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika pamwe nekubira musarudzo.
Mune imwewo nyaya ine chekuita nezvirango, zvichitevera musangano waitwa neMuvhuro pakati pemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, nemutungamiri wehurumende weAustralia, Amai Julia Gillard, VaTsvangirai vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Nhepfenyuro yeAustralian Broadcasting Corporation yati VaTsvangirai vati Zimbabwe yakazvipira kudyidzana nedzimwe nyika.
Gurukota reku Australia rinowona nezvetengeserana, Va Vraig Emmerson, vati hurumende yavo ichatora mazano ainenge yawudzwa naVaTsvangirai avo vari mu Australia pari zvino.
Vanowona nezvekunze kwenyika muBritain, VaWilliam Hague, vaudzawo nhepfenyuro ye British Broadcasting Corporation kuti danho ratorwa neEU rinobuditsa pachena kuti sangano iri rakazvipira kubvisa zvirango zvachose kana pane kushanduka kwezvinhu zvechokwadi muZimbabwe munyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutauriri we Zanu PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio 7 parunhare kuti havashamiswe nedanho ratorwa neEU iri asi vachangoramba vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kurwadzwa veruzhinji munyika kwete VaMugabe nevamwe vavo vari muZanu PF chete.